Ekpere a na -ekpegara Anima naanị iji mee ka mmadụ bịa [+]?
Ekpere nye nkpuru obi obula ime ka mmadu bia O nwere ike ibu ngwa agha nzuzo nke na enyere anyị aka n’oge ndị ahụ ebe ọdịghị onye ọzọ ga - eme ya.
N'oge ahụ anyị chọrọ ka mkpụrụ obi anyị niile hụ onye ahụ mana anyị amaghị ihe ma ọ bụ otu esi eme nke mere na ọ bụ nwanyị kpebiri onwe ya ịbịa hụ anyị, nke a bụ ekpere nwere ike ịbara anyị uru n'oge ahụ.
1 Ekpere nye nkpuru obi ka O me ka mmadu bia Gini bu gini?
1.1 Ekpere nye nkpuru obi obula ime ka mmadu bia
Ekpere nye nkpuru obi ka O me ka mmadu bia Gini bu gini?
Ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu iji mee ka onye ahụ bia zute anyi man anam enye eneme nneme ye nnyịn.
Mkpa ahụ e mepụtara n’onwe ya ịhụ anyị ka ọ na-abawanye ruo mgbe ọ bịara ileta anyị bụ ihe a na-apụghị izere ezere.
Ngwá ọrụ dị ike nke anyị nwere ike iji okwukwe mee mgbe ọ bụla anyị chọrọ, agbanyeghị ma ọ bụ ụbọchị niile.
Anima Sola, onye m di nso nke a gọziri agọzi, a na m arịọ gị ezigbo okwukwe ka i mee onye a ...
(aha onye ahu n'uju)
Alaghachiri m na ogwe aka m, na site na taa enwere m mmetụta na anyị ka ejikọtara nkekọ nke ịhụnanya, ana m arịọ gị, ike gị ịlaghachi iji obi ghe oghe bịakwute m na ọ nweghị ihe na-adọpụ gị n'akụkụ m, na ị ga-anọgide na-ahụ m n'anya na mkpụrụ obi, ahụ na mmụọ , site ugbu a na ruo mgbe niile ebighị ebi.
A na m ario gi n’ekpere a nye nkpuru obi naanị ime ka mmadụ bia, Anima Alone, nye m enyemaka gị.
A na m arịọ gị, jiri okwukwe m niile, Anima Alone, were onyinye gị ọrụ ebube mee, na ịbụ onye m hụrụ n'anya nke ukwuu ga-abịaghachi n'akụkụ m, ya na obi jupụtara n'ịhụnanya na nghọta, maka nke ahụ.
Nwee obi iru ala, arara m ekpere a nye gi, nke juworo m n’agha, m na-arịọ gi, echefula m, na m nọ n’uche gị mgbe niile.
Ekwere m gị nkwa na ozugbo onye a laghachitere,, M ga-emere gị ihe ndị a, _daalụ
Cheta na odighi gburugburu, ubochi ma obu onodu ekwesiri iji kpesie ekpere a.
Enwere ike ịme ya n'oge ọ bụla ma ọ bụ ebe ọ bụla.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịwụnye oriọna ma ọ bụ mee obere ikuku tupu ị na-ekpe ekpere, nke ahụ dị mma, mana nke ahụ agaghị eme ka ekpere ahụ belata ma ọ bụ sie ike karị.
Pụrụ iche ime na ebe enwere onye ezinaụlọ ma ọ bụ tufuo ma ọ bụ nke metụtara ụfọdụ anụ ụlọ.
Ike na ịdị irè nke ekpere a dị ịtụnanya n'agbanyeghị etu ọrụ ebube siri ike.
Anyi aghaghi ikpe ekpere ubochi niile. Anyị kwesiri inwe okwukwe n’ekpere ma kwere.
Ọ bụrụ n’anyị enweghị okwukwe, a gaghị elebara anyị anya.
I chere na ọ ga-aga nke ọma. Onye ahụ ga - anụ olu gị ma nyere gị aka.
Naanị kpee ekpere otu ugboro n’ụbọchị. N’oge na-adịghị anya, a ga-agakwa ịtụ anya gị, ị ga-enwekwa ọ .ụ.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ, nwuo oriọna na-acha ọcha ma ọ bụ kandụl na-acha ọbara ọbara iji kelee.
Ndị kandụl na-eje ozi nye n’ebe ndị ahụ na-enyere anyị aka n’iwu anyị nọ.
Ọ bụ ihe dị mfe, mana ọ dị oke arụmọrụ.
Ụwa Ihe ime mmụọ bụ eziokwu nke anyị gbara ya gburugburu na eziokwu ahụ bụ na anyị achọghị iji ya kpọrọ ihe apụtaghị na ọ dịghị adị, ọ bụ ya mere ịme ihe ndị a nke mmụọ ji bụrụ nke anyị na-abawanye ike.
na ekpere emere site na nkpuru obi puta na ikike puru iche nihi na odigh ihe di ka ezi obi mgbe gi na onye nwere mo na ekwu okwu.
Nke ahụ bụ otu Iwu nke mezuru na ekpere niile a na-eme na ndụ, onye obula obula, aghaghi iji okwukwe mee ya mgbe niile nihi na obu ihe a choro n’eme ka ndi mmadu mara na ekpere ga-aza ha.
Kpee ekpere nye mkpuru obi ka mmadu mee ka okwukwe ya bia. Ihe niile ga-adị mma.